लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅠ） -टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅠ）
समय: 2019-12-12 हिट्स: 161
आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने दुबै कपाल विकास को कम गर्न को लागी दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। तिनीहरू समान तरिकाले काम गर्दछन्, र दुबै धेरै प्रभावकारी हुन सक्छन्। कपाललाई पुन: हुर्काउनबाट रोक्नको अतिरिक्त दुबै उपचार विधिहरूले बाँकी कपालको बृद्धि गति र कपाल बाक्लोपनलाई घटाउन सक्छ।
धेरै आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने धेरै बिरामीहरू र ग्राहकहरूले धेरै सफल परिणामहरू प्राप्त गर्छन्, तर सबै भन्दा राम्रो नतीजाहरू प्राप्त गर्न, कुन विधि तपाईंलाई अधिक उपयुक्त छ भनेर निर्णय गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
आईपीएल बनाम लेजर कपाल हटाउने, भिन्नता के हो?
लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने दुबै समान सिद्धान्त मा काम गर्दछ। त्यो यो हो कि हल्का उर्जा र pig्गको रूपमा उच्च रment्गको क्षेत्रहरू द्वारा अवशोषित हुन्छ, जुन तातो हुन्छन्। तातोले फोलिकललाई हानी गर्दछ, कपालको वृद्धिलाई ढिलो बनाउँदछ र पूर्ण रूपमा यसलाई रोक्दछ। आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरूका बीच मुख्य भिन्नता प्रकाश स्रोत हो। आईपीएलले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम दृश्यात्मक प्रकाश प्रयोग गर्दछ जबकि लेजर कपाल हटाउने लेजरको गुणधर्म प्रयोग गर्दछ।
तर यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि छालाको क्षेत्रहरू जसमा उच्च रंगद्रव्य छ, जस्तै फ्रेकल्स र मोल्स, साथै गाढा छालाको रूपमा पनि अधिक प्रकाश ऊर्जा र तापको परिणामस्वरूप शोषण गर्दछ। यसले कुन कपाल हटाउने विधि तपाइँको लागि उत्तम हो भन्ने प्रभाव पार्न सक्छ। तपाइँलाई निर्णय लिन मद्दतको लागि, यहाँ दुबै प्रविधिहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे जानकारी छ।
कसरी आईपीएल कपाल हटाउने काम गर्दछ
आईपीएल ईन्टेन्स पल्स्ड लाइट हो र ब्रोड स्पेक्ट्रमको स्रोत, देख्न मिल्ने लाइटको उपयोग गर्दछ। यो प्रकाश विशेष छोटो तरंगदैर्ध्य हटाउन को लागी नियन्त्रण र विशेष संरचनाहरु लक्षित को लागी गरीएको छ। कपाल हटाउने क्रममा यो कपालमा मेलानिन रंगद्रव्यलाई लक्षित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो, जबकि अन्य प्रयोगहरूमा यो स्पाइडर वेनको उपचारले रगतमा हेमोग्लोबिनलाई लक्षित गर्दछ। प्रकाश उर्जा अवशोषित हुन्छ, तातो उर्जाको रूपमा स्थानान्तरण गर्दछ जसले कपालमा न्यानो पार्दछ, कणलाई हानी गर्दछ।
कसरी लेजर कपाल हटाउने काम गर्दछ
लेजर कपाल हटाउन को लागी कपाल कटाउन को लागी र प्रकाश ऊर्जा संग ब्लास्टिंग follicles क्षति को क्षमता को उपयोग गर्दछ। यद्यपि यो आईपीएल भन्दा अलि फरक छ जुन लेजरहरूको स्वामित्वमा भएको विशेष गुणहरूको प्रयोगमा छ। लेजरहरू अत्यन्त नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ताकि तिनीहरू सानो क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकून् र धेरैजसो टाढासम्म यात्रा गरेनन् सामान्य रूपमा प्रकाशले नखेलिकनै। तिनीहरू किरणहरू पनि उत्पादन गर्न सक्दछन् जुन केवल एक रंगको प्रकाश समावेश गर्दछ। लेजरका यी सुविधाहरू, त्यसकारण, लेजर कपाल हटाउने फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेजर पोरमा गहिरो तल यात्रा गर्न सक्दछ, follicle लाई प्रकाशको एकाग्र ब्लास्ट प्रदान गर्दै, र त्यसैले यसले दिने उपचारमा अधिक विशिष्ट हुन सक्छ।
अघिल्लो: लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅢ）
अर्को: लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅡ）